MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: KIA တပ်ရင်း (၂၄) စခန်းကို သိမ်းရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်
KIA တပ်ရင်း (၂၄) စခန်းကို သိမ်းရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်
ယမာန်နေ့တွင် KIA တပ်ရင်း (၂၄) စခန်း၏ အောက်ပို့စခန်း တခုကို သိမ်းထားသော အစိုးရ တပ်များသည် ဖွန်းပျန်ဘွမ် စခန်း ဌာနချုပ် သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစား ခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ဟု တိုက်ပွဲကို ကြီးကြပ်နေသူ KIA အရာရှိ တဦးက ပြောပါသည်။
“ (၅) ကြိမ်တိတိ တက်ထိုးတယ်။ တက်လာတိုင်း လန်ကျသွားပါတယ်။ မနက်က (၁၀) နာရီ လောက်မှာ တိုက်ပွဲစပါ တယ်။ အပြန်အလှန် အနီးကပ် တိုက်လိုက် ပါတယ်။ တကြိမ်တက်တိုင်း လန်ကျတာနဲ့ ဆုတ်တယ်။ ပြီးတော့ တပ်ပြင် ပြီးတာနဲ့ ပြန်တိုက်တယ်။ အကျအဆုံးများ လိမ့်မယ် ထင်တယ်၊ နောက် (၅) ကြိမ်လဲ ပြည့်တော့ ဆုတ်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့က မနေ့က သူတို့ သိမ်းထားတဲ့ လကန်ဘွမ်ပိုစ့် ကာကင်းကို ပြန်တိုက်ပြီး ၀ိုင်းထားလိုက်တယ်။
လက်နက် ကြီးတွေကတော့ ပွိုင့် (၇၇၁) ကနေ တလစပ်မနား တမ်းပစ်ပေးခဲ့တယ်။ လေယာဉ်ကတော့ ဒီနေ့ မလာဘူးဗျ။” ဟု ဆိုပါသည်။
KIA ခံစစ်ကြောင်းတနေရာ (ဓါတ်ပုံ KIA)
ဤကဲ့သို့ လန်ကျသွားသော အထူးတပ်များနှင့် စကခ(၂၁)တပ်ဖွဲ့များကို Bum Re Bum ခေါ် ပွိုင့်၇၇၁ စခန်းအောက် နားရှိ လုံလော့ အစိုးရ စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့များက စစ်ကူပေးပါသည်။ သို့သော် လုံလော့တပ်များသည် ပွိုင့်၇၇၁ စခန်းမှတပ် များ ထပ်မံနယ်မချဲ့နိုင်ရန် ချထားသော KIA တပ်ရင်း (၂၃)မှ တပ်ဖွဲ့များနှင့် ထိပ်တိုက်တိုးပြီး ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားခဲ့သဖြင့် ပြန်လည် ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် KIA တပ်ဖွဲ့များသည် စစ်ကူ မရခဲ့ဘဲ ကြားညှပ ပိတ်မိနေသော အထူးတပ်များကို ညနေ (၄) နာရီအထိ ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်နေဆဲဟု ဆိုပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အစိုးရ အထူးတပ်များ ပိတ်မိနေသော်လည်း လေကြောင်းနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းများ မရှိပေ။ လေကြောင်းများ သည်လည်း မိမိတို့တပ်များ ကြားညှပ်နေသည့် အတွက် ဗုံးကျဲ ရခက်ခဲလှသဖြင့် တိုက်ခိုက်မှု မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း အကဲခတ်များက ယူဆပါသည်။ သို့သော် အစိုးရ လေကြောင်းသည် မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာ လမ်းကြောင်း၌ရှိ သော နမ့်ဆန်ယန်းရွာကို ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဗုံးကျဲခဲ့ပါသည်။
KIA တပ်ဖွဲ့များနှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တို့သည် တနေ့လုံး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရ လက်နက်ကြီး ပစ်အားမှာ မူဟန်ကိုင်းတောင် လက်နက်ကြီးကုန်း ပျက်စီးသွားသည့် အတွက် ယမာန်နေ့ကထက် ပစ်အားများ နဲပါးခဲ့သည် ဟု KIA ဖက်က ဆိုပါသည်။
ဤအခြေအနေကြောင့် နက်ဖြန်တွင် အစိုးရ စစ်ရဟတ်ယာဉ်များ လှုပ်ရှားလာဖွယ် ရှိနေပါသည်။ သို့သော် လကန်ဘွမ် ပိုစ့်ကာကင်းတွင် အ၀ိုင်းခံနေရသော အစိုးရ အထူးတပ်များမှာမူ နောက်ဆုတ်ရန် ခက်ခဲနေလိမ့်မည်ဟု အကဲခတ်များ က သုံးသပ်နေပါသည်။
at 1/09/2013 08:09:00 PM
▼ January6- January 13 (75)
မြန်မာနယ်စပ် တရုတ်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်
ကချင်ဒေသကတိုက်ပွဲတွေကြောင့် နယ်စပ်တစ်လျှောက် တရုတ်...
လိုင်ဇာတွင် စိုးရိမ်မှုနှင့် ရွှေ့ပြောင်း ရှောင်တိမ်...
တပ်မတော် တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျ သုံးဦးသေဆုံး
ကချင်အရေးငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော...
လေယာဉ်ပစ်ချခံရသတင်း မြန်မာစစ်တပ် မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သေ...
ကာလုံအကြီးကဲချုပ်ဖြစ်သူ မင်းအောင်လှိုင်မှ ပြည်ထောင...
ဗမာစစ်ရဟတ်ယာဉ် တစ်စီး ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များ...
ဇန်န၀ါရီ (၁၀) ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်ဗိုလ် နှစ်ဦးကျ
KIA တပ်ဖွဲ့များ ဒေါ့ဖုန်းယန် အစိုးရ နောက်တန်း စခန်...
မြေပြင်တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ်ဖြစ်နေဆဲဟု KIO ပြော
ကချင်အရေးမှာ ဘယ်သူကနှုတ်ပိတ်ပြီး ဘယ်သူက ဘာတွေလုပ်မ...
ကေအိုင်အေနှင့် အစိုးရအကြား ခေတ်မီ နည်းပညာသုံး ဆွေး...
သမ္မတကို လိပ်မူသည့် အိတ်ဖွင့် ပေးစာ ထိုင်းရဲ မှတဆင်...
တိုက်ပွဲ ငြိမ်သက် နေရာမှ ဖါးကန့် ဒေသတွင် ပြန်ဖြစ်လာ
ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲမှာ ဓါတုလက်နက်တွေ သုံးစွဲနေတာမဟု...
အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ ကေအိုင်အေတို့ နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲကြော...
ကချင် ၂၃ ဖွဲ့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစ...
KIA ကို စစ်ဆင်နေသမျှ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနေ...
တရုတ်နိုင်ငံတွင်း ကချင်နွယ်များ ကချင်အရေး ဆန္ဒပြ
ကချင်ပြည်တိုက်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ...
ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး
ဖွန်းပျန်ဘွမ် စခန်း ဌာနချုပ်ကို ထပ်မံ စစ်ဆင်ရန် အစ...
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလံ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားမ၀င်လျှင် မြောင်းထဲဆင်းပေးပါ
????? .... သစ္စာဖောက်သူနဲ့ ကျေးဇူးကန်းသူ ဘယ်သူလဲ .....
ဂျန်မိုင်ကောင်း ရပ်ကွက် သိခါတော်ရ ဆရာ REV. လဖိုင်...
ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက် လုပ်ကွက်များတွင် ယခင် အစိုး...
KIO စစ်ဆင်ရေးနှင့် အနာဂါတ် နိုင်ငံရေး ပြသနာ
ကချင်ပြည်နယ် ဟိုပင်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ ရဲဝန်ထ...
အမေရိကန်သံ အမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချဲမှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ...
ကချင်ပဋိပက္ခ လေကြောင်း ထိုးစစ်ရပ်ဆိုင်းရန် ကုလနှင့်...
KIA ၏ ဖွန်းပျဉ်ဘွမ် တပ်စခန်းအား သိမ်းပိုက်ရန် အစို...
KIA အပေါ် မြန်မာစစ်တပ်က အပြင်းထန်ဆုံး စစ်ပွဲ ဆင်နွဲနေ
KIA တပ်ရင်း (၂၄) စခန်းကို သိမ်းရန် ကြိုးစားသော်လည်...
ဖွန်းပျဉ်ဘွန် တောင်ကုန်းကို သိမ်းပိုက်ရေး အစိုးရတပ...
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ချီတက်ပွဲ မြစ်ကြီးနား ရဲမှူးကြ...
လေကြောင်း ထိုးစစ်ကြောင့် ကချင်ဒုက္ခသည်များ လုံခြုံေ...
KIA တပ်ရင်း (၂၄) စခန်းကို သိမ်းပိုက်ရန် စစ်ဆင်
ဆဒုံး – ကန်ပိုင်တီလမ်း ခရီးသွားများ စိတ်ဆင်းရဲနေရ
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် တောင်ကုန်းအမှတ် ၇၇၁ ကို လေကြောင...
KIA တပ်ရင်း (၂၄) ၏ ရှေ့ကာ ကင်းပွိုင့် တခု လက်လွှတ်လ...
KIO အား လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ...
UNFC နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းအဖွဲ့တို့ ဇန်နဝါရီ ဒုတိယ အ...
ကချင်စစ်ပွဲ အပစ်ရပ်ရေး UNFC နည်းလမ်းရှာ
နမ်ဆန်ယန်ရွာကို မြန်မာစစ်တပ် မီးရှို့ဖျက်ဆီး
“ပြေလည်အောင် ဆွေးနွေးချင်တဲ့ ဆန္ဒပေါ်မှာဘဲ မူတည်ပါတယ...
UNFC ညီလာခံမှာ ကချင်ပြည်နယ်အရေး အလေးထား ဆွေးနွေးမည်
ကချင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်ရန် ...
KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့၏ ဘတပြန် ကျားတပြန် ထိုးစစ်များ
ပြည်သူ့စစ်စခန်းကို KIA ဝင်ပစ်၊ တဦးဒဏ်ရာရ
အစိုးရတပ်များ လိုင်ဇာ တောင်ကုန်းတခုကို ဆက်လက် ထိုး...
ကချင်ဒေသ ပဋိပက္ခ ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးရန် NLD ကို E...
အစိုးရသိမ်းထားသော ပွိုင့် ၇၇၁ စခန်းကို KIA ၀င်တိုက်
KIO ကို နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုန်ပေါ် ရောက်မလာရေး တွန်းပု...
MYEN KAICHYAN LAIZA KAW LU RIM
မလေးရှားရောက် တိုင်းရင်းသားများ ဗမာအစိုးရ သံရုံးရေ...
LAIZA MUKLUM KAW LAKNAK KABA HKRAT
ကချင်ပြည်နယ်အရေး စိုးရိမ်ကြောင်း ဗြိတိန်နဲ့ အမေရိက...
ကေအိုင်အိုက ဖမ်းမိထားတဲ့ အစိုးရ သုံ့ပန်းတွေကို ပြန...